Dhijitari Kudhinda Inosangana neEcommerce neZmags Verge
Chitatu, September 5, 2012 China, Gunyana 6, 2012 Douglas Karr
Our Ecommerce anotsigira, Zmags, yaburitsa muoni nyowani wekutsikisa wedhijitari. Verge ™ inobvumidza makambani kushandura maPDF avo (nezvimwe zvirimo) kuita muoni uko kwavanogona kufukidza data, mifananidzo, vhidhiyo, uye kunyangwe yavo ecommerce chikuva. Muoni anogona kutumirwa pakombuta, nharembozha uye piritsi kuburikidza neyakareruka manejimendi chikuva.
Uku ndiko kufambira mberi mukushambadzira kwedhijitari, zvichibvumira makambani kuvaka zviitiko zvinofambidzana uye zvine chekuita pavanogona kutengesa zvakananga. Munguva yakapfuura, kambani yaigona kugovera magazini yayo kana bhurocha asi yaifanira kuvimba nemuverengi anodzoka kuchitoro chepamhepo kuti atenge. Iyi nyowani nyowani inobvumidza iyo kambani kuwedzera hotspots yekutenga ruzivo uye kunyange kuvabvumidza kurongedza akati wandei zvigadzirwa pamwechete.
Kubva kuZmags Verge chigadzirwa peji
Zvemukati-zvakapfuma mapeji uye inesimba mifananidzo inogona kuongororwa intuitively, yakagovaniswa uye nekukurumidza pombi kana kubaya kuendeswa mu mungoro yekutengera, zvese pasina zvinoda kutwazve peji kana kuzorodza.
Inogonesa ruzivo rwevashandisi pamapuratifomu ese kutora mukana izere neiyo iPad HTML5 mashandiro, pamwe ne mafoni, pcs kana malaptop; inogona kuiswa mukati chaimo peji rako re Facebook.
Zmags chete Shop the Look mashandiro anowedzera mari nekurega vatengi vachiona zvinhu zvese mune chero chinhu chigadzirwa chigadzirwa, uye ongorora nekutenga zvinhu zvakasiyana kana pamwe chete.
Uye heino Verge chigadzirwa bhurocha - mune muoni. Ive neshuwa yekudzvanya kumusoro kuruboshwe bhatani kuti uone yakazara skrini!
Tags: kudhindwa kwedhijitariecommerceonline shoppingPDFpdf manejimendi